Kungani kufanele sifake amakhamera ezokuphepha efulethini
Izigidi zabantu abahlala kuwo wonke amagumbi omhlaba zifuna usizo lwamakhamera okuphepha ukuze avikele impahla yawo ebalulekile ekutholeni noma nge-DA ...
Izigidi zabantu abahlala kuwo wonke amagumbi omhlaba zifuna usizo lwamakhamera okuphepha ukuze avikeleke.impahlakusuka ekuntshontshelwe noma kulimele.
Amacala angenzeka nganoma yisiphi isikhathi ngosuku. Kodwa-ke, ngeke ukwazi ukubheka empahleni yakho usuku lonke. Yilapho amakhamera ezokuphepha aqala khona ukudlalwa. Bangakwazi ukuqapha isakhiwo sakho kanye nokuzungezile lapho-ke bakwazise ukuthi kwenzakalani lapho.
Amakhamera okuphepha anamandla okuhlinzeka ngokuphepha kwabanikazi abaphethe ngezindlela eziningi ezahlukahlukene. Isibonelo, uzokwazi ukwazi ngayo yonke ingozi ezayo kusuka kumlilo, amasela, ama-burglars ngendlela elula. Eqinisweni, amakhamera okuphepha adlale ukusebenza okumangalisayo ngemuva kokwehliswa kwamanani obugebengu eminyakeni embalwa edlule.
Uma ukhathazekile ngokuphepha kwakho, ungasebenzisa imali yakho bese uyifaka ngaphandle kokusolwa. Amakhamera wokubhekwa awagcini nje kuphela ukuqapha amahhovisi ezentengiso azosetshenziselwa ukuqinisa ukuphepha kwezindlu namakamelo.
Okokugcina kodwa, udinga ukuyifaka kumhlinzeki wesevisi odumile. Udinga ukubheka inkampani enikeza ukufakwa kwekhamera yezokuphepha okungcono kakhulu kwekhamera yefulethi ngoba kuzokusiza ukuzwa zonke izinzuzo ezihambisana nokusebenzisa imali ohlelweni olusha.
I-Quanity njengohlobo lwe-Domain lwe-LS Vision, siyagoba ngokwethu ukuhlinzeka insizakalo engcono kakhulu nemikhiqizo, siyisinqumo esihle kunazo zonke.
PHAMBI Izindaba ezishaqisayo: IHikvision ithole i-Pyronix
Ungathuthukisa kanjani amaqhinga wesaziso sesaziso se-prospriate ekolishi OLANDELAYO